Ukupakisha kunye nokuThengwa kweBhegi yamagxa eTshayina kunye neFektri | Umzingeli omtsha
Ukupakisha kwabafazi besikhumba esifubeni sokuhamba / ukuthengwa kwamagxa
Ikhowudi yemveliso: I-HT54016
Ubukhulu:I-10.63 × 7.09 x i-2.76 intshi
Izinto: Ilaphu elibonisayo leLaser
Umbala:Njengomfanekiso & ngentando yakho & ukulandela ilaphu warehuose ngayo
Ixabiso FOB: USD7-USD10
* Izinto: Umgangatho DB yesikhumba, i-100% yomelele, ubungqina bamanzi, nxiba ukumelana nemibimbi enganyangekiyo, akukho deformation emva kokuhlamba.
* Isakhiwo sebhegi: ibhegi enkulu yokuthwala, iipokotho ezimbini ezingaphambili, uyilo lweepokotho ezininzi. Igumbi elifanelekileyo lokugcina izinto zemihla ngemihla njengefowuni, isipaji, amakhadi, isitshixo, izithambiso njalo njalo
* Umtya Adjustable ukuba lula kwaye bekhululekile enxibe kunye nokusebenza uziphu egudileyo. Unokunxiba ngasemva, esifubeni, okanye uxhome egxeni, kulula kwaye kulula ukuyibamba kwaye uphathe izinto zakho zemihla ngemihla naphi na.
* Ibhegi yomyalezo wamagxa, isitayile esilula somntu wonke, usuku lokuzalwa oluhle, Isipho seholide sentombi, intombi kunye nenkosikazi
* Le ubhaka laser isilingi zingasetyenziswa njenge intaba / ubhaka ubhaka, ubhaka daypack, umsebenzi okanye uhambo rucksack, nto leyo efanelekileyo abafazi kunye namantombazana elivisayo
Gcina ubhaka wesikhumba se-PU: Sula ngelaphu elimanzi kunye nesepha esicocekileyo ukuba ucocekile ngaphandle; Yihlambe ngamanzi acocekileyo kubushushu obuqhelekileyo.
-Hang ukuze wome kwaye ugcine kwindawo engenisa umoya endaweni yelanga.
-Isenokuba nevumba lendalo ekuqaleni, kodwa ivumba liyakuphela emva kosuku ukuphuma komoya.
-Ndicela uvumele umahluko omncinci wombala ngenxa yeso esweni kunye nolwahluko okhanyayo.
* 【Ukwaneliseka Gurantee】: 100% ukwaneliseka isiqinisekiso kunye nenkonzo yabathengi enobubele: Sukuba nexhala malunga nenkonzo. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki malunga nale nto, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. (Ngayo i-odolo, unokufumana: UMTHENGISI WOQHAGAMSHELWANO) Siya kuba lapho nawe!
Egqithileyo Ubhaka omkhulu weBhegi yangaphandle yezemidlalo i-3P yeeNgxowa zeMikhosi yamaKhosi yokuHamba ngeKampu yokuKhwela okungangenwa ngamanzi yokuNxiba iNylon
Okulandelayo: Iingxowa zokuzingela ngobuchule amajoni amajoni omkhosi weAirosoft oQhushululu oQhushululu oQhushululwayo oQhushululu oQhushululwayo
I-Unisex yefestile engenamanzi esifubeni kufuneka ...